ROCK Sitor Digital Display Car Charger , Car Charger Adapter , USB Car – Remax Online Shop
ROCK Sitor Digital Display Car Charge...
ROCK Sitor Digital Display Car Charger , Car Charger Adapter , USB Car Charger , Fast Car Charger , Lightning Car Charger , Cigarette Lighter iPhone Car Charger , ကားအားသှငျးခေါငျး
ကား မောင်းရင်း ဖုန်း အားသွင်းစရာ
𝗥𝗢𝗖𝗞 𝗦𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗽𝗹𝗮𝘆 𝗖𝗮𝗿 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝗿
PRICE - 8,000 Kyats.
ကားမောင်းချိန် ခနလေး အတွင်းမှာ
ဖုန်း ( ၂ ) လုံး တစ်ပြိုင်တည်း အားသွင်းနိုင်မယ့် Dual USB .
ဗို့အား စီးဆင်းမှုကို LED
Digital Display ဖြင့် တိကျစွာပြသခြင်း .
Material - Fireproof ABS+PC
အပူဒဏ်​နှင့်​ မီး​လောင်​ခြင်းကို ခံနိုင်​ရည်​ရှိ​သော
အရည်​အ​သွေး​မြင့်​မားသည့်​ ABS / PC ဒြပ်​​ပေါင်းဖြင့်​ထုတ်​လုပ်​ထားတယ် .
Output : DC 5V / 3.4A အမြင့်​ဆုံး လျှပ်​စစ်​ပမာဏနဲ့
ကားကြီး ကားငယ် ​မ​ရွေး အသုံးပြုနိုင်တယ် .
#Current ကို လိုအပ်​သ​လောက်​ ချိန်​ညှိ​ပေးနိုင်​​ခြင်း .
Intelligence Chipset ထည့်​သွင်း​ပေးထား​သော​ကြောင့်​ ဖုန်း ၊ တက်​ဘလက်​ ၊
ဒီဂျစ်​တယ်​ကင်​မရာ နှင့်​ အခြားပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အားသွင်း​ပေးနိုင်​ပါတယ် .
အားအဝင်​များခြင်း ၊ ​အပူလွန်​ကဲခြင်း ၊ ဝါယာ​ရှော့ခ်​ ဖြစ်​ခြင်းတွေကိုလည်း Safety အပြည့်နဲ့ ကာကွယ်ပေးမှာပါ .
Sitor LED Digital Display
2 USB Car Charger ( LED 2USB ) - 10000 Kyats.